Phuket VIP Mercury Ihhovisi - Umagazini Design
Ihhovisi Ngokuya ngengqikithi yokuvuleka futhi kuhlolwe ngokujulile komkhiqizo, bahlola ukwakheka futhi badala ukuhlanganiswa okubukwayo kokunwetshwa okubonakalayo nendaba yomkhiqizo neplanethi njengento eyinhloko yokudala. Uhlelo luxazulule lezi zinkinga ezintathu ezilandelayo ngemicabango emisha yokubuka: Ibhalansi yokuvuleka kwesikhala nemisebenzi; Ukwahlukaniswa nokuhlanganiswa kwezindawo ezisebenzayo zesikhala; Ukuvama nokushintshwa kwesitayela sendawo eyisisekelo.
Igama lephrojekthi : Phuket VIP Mercury, Igama labaklami : Songhuan Wu, Igama leklayenti : N-HD design.
Ihhovisi Songhuan Wu Phuket VIP Mercury